PSG Oo Kalsooni Ku Qabta Inay Sii Heysato Mbappe Kaddib Imaatinka Messi – Garsoore Sports
PSG Oo Kalsooni…
PSG Oo Kalsooni Ku Qabta Inay Sii Heysato Mbappe Kaddib Imaatinka Messi
Kooxda ka cayaarta horyaalka Ligue 1-ka Faransiiska ayaa dooneysa in ay isku heysato saddexleeyda weerar ee halista leh xilli-cayaareedka soo aaddan maadaama ay lasoo saxiixdeen Messi waxay doonayaan inay Mbappe ceshadaan iyadoo Neymar-na uu durbaba heshiis u saxiixay kooxda ku cayaarta Parc Des Princes.
Wargayska Goal ayaa ku waramaya in Paris Saint-Germain ay ku kalsoon tahay inay sii haysan doonto Kylian Mbappe maadaama ay lasoo saxiixdeen Lionel Messi, iyadoo Real Madrid ay weli u ordeyso sidii ay ku heli lahayd xiddiga reer France.
Mustaqbalka Mbappe ayaa ahaa mid si weyn loo hadal hayay bilihii ugu dambeeyay, iyadoo ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka uusan weli heshiis ka gaarin qandaraas kordhinta PSG.
22 jirkaan ayaa si aad ah loola xiriirinayaa Madrid kaddib markii uu galay 12kii bilood ee ugu danbeysay heshiiskiisa haatan, laakiin imaanshaha Messi ee Parc des Princes ayaa ku hoggaamin karta go’aan deg deg ah oo ku sabab kara inuu sii joogo Paris muddo dheer.
Chelsea Oo Aqbashay Dalabkii Ay Roma Kasoo Gudbisay Abraham